Betsaka ny fihatsaram-belatsihy amin'ity resaka aizana ity, ka mahatonga ny maro miafina sy manala zaza avy eo.
Marina fa betsaka ny fomba sy ny fivavahana mametraka ny hoe tsy tokony hanao firaisana ny lahy sy ny vavy raha tsy efa manambady, ary tsy tokony hijangajanga, na hiaraka amin'ny olon-kafa.
Ny zava-misy anefa dia maro ireo tanora izay miaraka ary manao firaisana ara-nofo, maro koa ireo efa manambady nefa maro anaka.
Ny vehivavy dia eo amin'ny faha 13 taonany, na mihoatra kely, dia tonga fadim-bolana, na règle. Miova eo ny toe-batany ka isam-bolana izy dia misy atody, na ovule, izay miandry ny tsimoka filahiana, na spermatozoïdes, izay mety hitambatra aminy ka ho lasa zaza.
Ny vehivavy dia manana atody voafetra eo amin'ny 400 eo, ka rehefa tapitra izay dia tsy afaka miteraka intsony izy. Io ilay ménopause, manodidina ny faha 50 taonany eo izany.
Mihamalefaka ihany koa anefa ny taovam-pananahan'ny vehivavy manomboka ny faha 35 taonany, ka izay no mahatonga ny vehivavy tsara manan-janaka eo anelanelan'ny 21-40 taonany raha tara.
Ny tsimoka filahian'ny lehilahy kosa, eo amin'ny 3 ml isaky ny manao firaisana, ary mahatratra hatrany amin'ny 1,5 millions any ny isan'ny tsimoka fananahana, na spermatozoïdes, izay hifandrombaka hamonjy ilay atody na ovule. Iray ihany anefa no ho tafiditra ao anatin'io atody io.
Noho ny antony maro dia mety hisy atody roa no latsaka avy amin'ny vehivavy, dia hisy tsimoka filahiana, na spermatozoïde roa izany hiditra tsirairay amin'ireo atody ireo. Teraka kambana eo ilay vehivavy, tsy hitovy ireo zaza kambana ireo satria atody roa samihafa sy tsimoka filahiana na spermatozoïde roa samihafa no hiray aminy. Io ilay antsoina hoe faux jumeaux, mety ho vavy izany ny iray, ary mety ho lahy kosa ny zaza iray.
Fa raha efa niray kosa ilay atody sy ilay tsimoka lahy, vao nizara roa ilay atody, dia hitovy tsy misy hafa ilay zaza roa kambana, ka na samy ho vavy, na samy ho lahy izy ireo. Io ilay vrais jumeaux.
Ahoana no atao mba tsy ho bevoka raha misy ny firaisan'ny lahy sy vavy?
Maro ireo fomba artifisialy hanakanana izany, toy ny fimailo na kapôty ho an'ny lehilahy, izay maro mahafantatra. Misy ny kapôty atao amin'ny vehivavy, misy ireo fanafody na pilule, misy ireo tsindrona atao amin'ny vehivavy na ny lehilahy, misy ireo famatorana na fanalana ny fitaovam-pananahana. Tsara ny manantona ireny sampana fandrindrana ny fiterahana ireny.
Ny tsara indrindra dia miaraka ny mpivady na ny mpifankatia fa tsy raharahan'ny vavy fotsiny izany, satria mety fanapahan-kevitra lehibe hisy fiantraikany any aoriana any.
Inona kosa ny fomba natoraly na ara-baojanahary ?
Ny fampiasa indrindra dia ny fanisana andro fadim-bolana.
Ny andro voalohany ahatongavan'ny fadim-bolana na ny règle no antsoina hoe andro voalohany, na ny 1er jour.
Maharitra 3-5 andro eo no mandeha ny rà, tokony tsy ho mena midorehitra izy io, fa somary rà maloto, tsy dia tokony hivaingana be koa. Maro ny vehivavy no marary eo, indrindra fa ny tovovavy mbola tsy nanao firaisana satria mbola tery ny col. Misy moa ny dokotera sasany heverin'ny tovovavy te hanararoatra azy rehefa hilazany hoe, afaka ihany io marary io rehefa manao firaisana.
Misy kosa toe-batana mety ho torana mihitsy amin'io fotoana io. Ny dokotera no tsara antonina rehefa misy olana.
Manomboka eo amin'ny andro faha 10 ka hatramin'ny faha 14 eo no milatsaka ny atody, ka raha eo no manao firaisana dia mety hiforona ny zaza.
Tsara ny mahafantatra fa ny tsimoka filahiana dia velona mandritra ny ora maromaro, ary ny atody kosa dia mety velona andro vitsivitsy.
Matetika ny andro faha 9 ka hatramin'ny andro faha 16 izany no tsy tokony hanaovana firaisana raha tsy te hiteraka. Tsara ho fantatra fa 28 andro no faharetan'ny volana amin'ny vehivavy, izany hoe afaka 28 andro dia miverina indray ny règle.
Roa herinandro ao aorinan'ny fanombohan'ny règle izany no mampisy fananahana. Ny tsara indrindra izany no mitandrina ny 10 andro manodidina io 14 ème jour io. 5 andro alohan'io, ary 5 andro aorinany.
Ho an'ireo izay manana cycle court, règle 21 jours, na cycle long 32 jours dia tsara ny miresaka amin'ny dokotera mpitsabo na gynécologue.
Azo atao tsara koa no manaraka io 14ème jour io amin'ny alalan'ny maripàna na ny température. Milatsaka hatrany amin'ny 36°C ny maripana.
Maro ireo logiciel tsy andoavam-bola mety hita amin'ny internet azo anarahana izany fadim-bolana na menstruation izany.
Ny hisarihina ny saina eto izany dia ny hananana fitondran-tena mendrika amin'ny samy mpifakantia. Fananana zaza iriana sy azo velomina. Ary indrindra ny fifadiana amin'ny fanalan-jaza izay famonoana olona izany.
Raha misy aretina mifindra dia tsy maintsy mitsabo tena miaraka ny mpivady na ny mpifankatia. Mety hiteraka ady izany eo amin'ny tokan-trano na ny fiarahana fa làlana tsy maintsy atao izany raha tiana ho sitrana sy hitohy ny fifankatiavana.